टेली सिरियल "लभयात्रा" काे शुभारम्भ (भिडियाे सहित) - Purbeli News
टेली सिरियल “लभयात्रा” काे शुभारम्भ (भिडियाे सहित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०३, २०७६ समय: ८:००:१०
इटहरी / बसन्त राईको लेखन तथ निर्देशन रहेको टेली सिरियल “लभयात्रा” काे शुभारम्भ भएकाे छ । फागुन ३० गते शुक्रबार देखि ग्लाेरी मिडिया प्रा.लि.काे जिएम नेपाल यूट्यूबबाट सार्वजानिक गरिएकाे उक्त सिरिजमा बालापनकाे प्रेम कथा झल्कीएकाे छ । समयको अन्तराल सँगै लव र माया दुई नामकाे चाेखाे सम्बन्ध बिछोड हुन पुग्छ। त्यही लव ठूलो भए पछि मायालाई खोज्न आफ्नो ठाउँ छोडेर हिड्छ ।
लभले मायालाई भेट्टाउन सक्छ त ? कतै अरुकै मायामा परेको पो छ कि? यो सबै बुझ्नका लागि लभ यात्रायात्राको अरु एपिसोड हेर्नै पर्ने हुन्छ। बसन्त राईको लेखन तथा निर्देशन रहेको प्रेमकाे यात्रामा छायांकन दिनेश राई(सुबिन) ले गरेको छ्न । वसन्त राईकाे सम्पादन रेहेकाे उक्त सेरिजमा कलर ग्रेडिङ शिरकुमार साम्पाङले गरेका छन् । नवीन रहपालको संगित, नवीन रहपालको स्वर रहेकाे उक्त सिरिजमा एरेन्ज गजेन बान्तावा राईले गरेका छन भने छायांकन दिनेश राई(सुबिन) काे रहेकाे छ ।
जीवन भोगाइ, मिलन बिछोड, हाँसो र आशुको बेदनाहरुकाे सन्दर्भमा लव यात्रा बनेको बताइएको छ । वसन्त राई सँगै सरिता राई, धिरेन राई, अनिसा कार्की, अलेक्सा थापा, दिनुका मगर, असोक साम्पाङ राई, उमा चाम्लिङ राई, ग्यानु बस्नेत, लक्ष्मी राई, सरोज मगर, सरु मगर तथा बालकलाकार अनुप राई, एलिया राई लगायतको अभिनय लव यात्रामा रहेकाे निर्देशक राइले बताए ।